Thintlu Dot Com
by Juan in အထွေထွေ
အခြိနျ အကွာကွီး ပဈထား ရတဲ့ အတှကျ ‘အားနာပါတယျ၊ တောငျးပနျပါတယျ’ ဆိုတာက စရ မှာပဲလေ။ post တှေ အသဈ မတငျဖွဈတာ ကိုတော့ ဆငျခွတှေေ ပေးပွီး မရှငျးပွခငျြ တော့ပါဘူး။ မအားတာတော့ အမှနျပါ။ နောကျ ဆိုရငျလညျး ဒီ hiriautatpa.com မှာ တျောရုံနဲ့ update လုပျဖွဈတော့မယျ မထငျ။ ရှိပွီးသား စာ အဟောငျးတှကေိုတော့ ဒီအတိုငျး ထားပါမယျ။ တခြို့ကိုတော့သငျ့လူ blog (www.thintlu.com) မှာ ပွနျတငျပါမယျ။ ကနျြတဲ့ စာရေးသူတှလေဲ ကိုယျပိုငျ blog ကိုယျစီနဲ့ ဖွဈကုနျ ပါပွီ။ နီမို၊ သူသူငါငါ တို့ရဲ့ စာတှကေို De Novo မှာ ဆကျလကျ တငျဆကျ ပါလိမျ့မယျ။
Blog အသဈ သငျ့လူ ကို လာရောကျ လညျပတျကွပါလို့ ဖိတျချေါ လိုပါတယျ။ ဒီမှာ တို့လို့တနျးလနျး ထားခဲ့တဲ့ Outbreak ကွီးကို သငျ့လူ မှာ ပွနျတငျနိုငျဖို့ ကွိုးစား နပေါတယျ။ ဘယျလို ကွိုးစားသလဲ ဆိုရငျ ဇျောဂြီ ၂၀၀၉ နဲ့ ရိုကျထား မိတဲ့ စာတှကေို ဇျောဂြီ ၂၀၀၈ နဲ့ ပွနျရိုကျ ဖို့ပါ။ MS Word ပျေါမှာ စာမကျြနှာ ၂၁၉ မကျြနှာ ရှိတဲ့ အဲဒီ ဝတ်ထု အစအဆုံးကို သငျ့လူက လကျတနျး ဘာသာပွနျ၊ စာရိုကျ၊ ပေးပို့ ခဲ့ပမေယျ့ ဇျောဂြီ ၂၀၀၉ နဲ့ ဖွဈနတောမို့ ဒီတဈခါ blog အသဈကရြငျ ယူနီကုဒျ ပွောငျးရ လှယျတဲ့ ၂၀၀၈ နဲ့ပဲ တငျတော့မယျလို့ ဆုံးဖွတျ ထားတာမို့ ပွနျရိုကျပွီးမှ တငျမယျ ဆိုပွီး သိမျးထား ခဲ့တာ ကွာပါတယျ။ ဒီကွားထဲ သငျ့လူ ဘာသာပွနျတဲ့ ဝတ်ထုတို တှကေိုလဲ ဒီမှာ မတငျဖွဈပါ။ ဘာဖွဈလို့လဲ ဆိုတော့ thintlu.com ကို ပွငျဆငျ နရေ လို့ပါ။ ပွငျဆငျတယျ ဆိုလို့ အထှအေထူးတော့ မမှတျ ပါနဲ့။ Blogger နဲ့ ဘယျလို blog လုပျသလဲ ဆိုတာ ပွနျပွီး လလေ့ာ နရေတာပါ။ အရငျတုနျးက စမျးသပျဖူး ပမေယျ့ wordpress ပျေါမှာပဲ အခြိနျ အမြားဆုံး ကုနျခဲ့တာမို့ အခုတော့ blogger ဟာ အသဈလို ဖွဈနပေါတယျ။ blogger ကို ပွနျသုံးခငျြရတာ ကတော့ google ကို သဘောကြ လို့ပဲ။ email, social networking, blogging, feed reading, photo sharing အစရှိတဲ့ service တှကေို တခြိနျတညျး တနရောတညျးမှာ account တဈခုထဲက သုံးရတာ သဘောကြ လို့ပါ။
အတ်တလနျတဈ ရှာပုံတျော ပွီးဆုံးတော့ သငျ့လူဟာ ဘာသာပွနျ စာပကေို ပိုပွီး အခြိနျ ပေးလာခဲ့ ပါတယျ။ Juan ဆိုတဲ့ ကလောငျနာမညျ နဲ့ သမိုငျးထဲက မွနျမာပွညျသား ၊ ထို့ကွောငျ့ ဤအရာကို သံသရာဟု ချေါသညျ စတဲ့ ဆောငျးပါးမြား ရေးခဲ့ စဉျက သငျ့လူဟာ သူ့ရဲ့ ဒှါရာဝတီမှာ ရကျငါးရာ ကို စာအုပျ ထုတျဝဖေို့ စိတျကူးယဉျခဲ့ ပါတယျ။ ဒါကွောငျ့လဲ လှုပျလှုပျခတျခတျ ရှိလှတဲ့ ဒီ သမိုငျး ဆောငျးပါး၊ ကနျြးမာရေး ဆောငျးပါး တှကေို နာမညျ တမြိုးနဲ့ ရေးသားခဲ့တာပါ။ သမိုငျးထဲက မွနျမာပွညျသား series ဟာ online ပျေါမှာ တျောတျာမြားမြား ပြံ့နှံ့ ခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီ နောကျမှာတော့ သငျ့လူဟာ ဂဘေရီရယျ ဂါစီယာ မာကေး နဲ့ တှရှေိ့ပွီး ပဉ်စလကျ သရုပျမှနျ စာပေ နောကျကို ပါသှား ပါတော့တယျ။ အဲဒါကွောငျ့ သငျ့လူဟာ မာကေးရဲ့ ဂန်ဓဝငျ ဝတ်ထုရှညျကွီး One Hundred Years of Solitude ကို ဝေးလှငျ့ကငျးကှာ နှဈတဈရာ အဖွဈ ဆုံးခနျးတိုငျအောငျ ဘာသာပွနျခဲ့ပွီးတဲ့နောကျ စာအုပျ ထုတျဝဖေို့ စီစဉျ နပေါပွီ။
၂၀၀၈ မှာ ဟနျခကျြ က စခဲ့တဲ့ ဒီ blog ဟာ ဒိုမိနျးနိမျး အမြိုးမြိုး ပွောငျးလဲ ပွီးခဲ့ ပမေယျ့ စကတညျးက တငျခဲ့တဲ့ စာတှေ တျောတျောမြားမြားကို တတျနိုငျသလောကျ ထိနျးသိမျး ထားခဲ့ ပါတယျ။ blog platform ကို blogger ဘကျ ပွနျပွောငျး လိုသျော ငွားလညျး post ၂၀၀ ကြျောကို စိစဈ ရမယျ့ အလုပျဟာ နညျးပညာ ကြှမျးကငျြမှု အားနညျးတဲ့ ကြှနျတျောတို့ အဖို့ အခကျအခဲ တဈခု ဖွဈလို့ လောလောဆယျ hiriautatpa ကို ဒီ အတိုငျး ထားပွီး thintlu.com မှာသာ update လုပျသှားဖို့ စီစဉျ ထားပါတယျ။
အစဉျအဆကျ အားပေး ခဲ့တဲ့ မိတျဆှေ အပေါငျးကို ကြေးဇူးလညျး အထူး တငျသလို တုံ့ပွနျမှု အားနညျးခဲ့တဲ့ ကြှနျတျောတို့ကို ခှငျ့လှတျကွဖို့လညျး တောငျပနျ လိုပါတယျ။ ကတိကဝတျတှေ ပေးပွီး မပွောလိုတော့ ပမေယျ့ စာဖတျသူမြား စိတျကနြေပျဖို့ နဲ့ စာရေးသူမြား ပီတိ ဖွဈဖို့၊ ဒီ နှဈခု ညီညှတျရအောငျ ပွနျလညျ ကွိုးစား နပေါကွောငျး ပွောပါရစေ။
by သင့်လူ in ဘာသာပြန်, Outbreak
၁၉၇၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ (၁၆) ရက်။
ဘန်ဘာ ခရိုင် ကျန်းမာရေး ဦးစီးမှူး ဒေါက်တာ လူဂါဆာ သည် ပြူတင်းပေါက် ကိုဖွင့်လိုက်၏။ နံနက်ခင်း နေရောင်အောက်ဝယ် တဖျတ် ဖျတ် တလက်လက် အရောင်တောက်နေသော ဇိုင်ယာမြစ် ကို လှမ်းမြင် နေရ သည်။ သူ့ စိတ်ထဲမှာတော့ ထိုမြစ်ကို ဇိုင်ယာမြစ်လို့ မခှေါချင်။ More
ဤဝတဿတုသည် နာမည်ကျှော အမေရိကန် စာရေး ဆရာ (သူတို့ ဆီမှာတော့ story teller ဟုသုံးသည်၊ ပုံပြောဆရာ၊ ဇာတ် ကြောင်းပြော ဆရာ၊ ကွက်စိတ် ဆရာ ဟုများ ဘာသာပြန်ရမည်လားမပြောတတ်) ရှောဘင်ကွတ်ခ်၏ Outbreak ကို ဘာသာပြန် ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ More
ပေါက်ပင် ဘာကြောင့် ကိုင်းရတယ် (၇)
by သင့်လူ in အက်ဆေး, ပေါက်ပင် ဘာကြောင့် ကိုင်းရတယ်
“ကမဿဘာကျှော ဆရာဝန်ကြီးတွေရဲ့ ဒီသုတေသန တွေ့ရှိချက်တွေ အရ အခု ကျွန်တှောတို့ ဆန်းပြား ကုမဿပဏီကြီး က ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ ထူးမခြားနားဆေးဟာ အခြားမျိုးတူဆေးတွေထက် အာနိသင် အပြတ် အသတ်သာပြီး ဘေးထွက် ဆိုးကျိုး လုံးဝ မရှိတာ အခု ဆရာကြီး မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ ပါပဲ ခင်ဗျ” More
ပေါက်ပင် ဘာကြောင့် ကိုင်းရတယ် (၆)
အခြား ကုန်ပစဿစည်းမှာ ထုတ်လုပ် ရောင်းချသူက ဝယ်ယူ သုံးစွဲသူဆီ တိုက်ရိုက် သတင်း အချက် အလက် တွေပေးပြီး ရောင်းရအောင် ကြိုးပမ်းလေ့ရှိပေမဲ့ ဆေးဝါး ကတော့ တစ်မျိုး တစ်ဘာသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာ မှာ ဆေးဝါး ဆိုတာကို အနောက်တိုင်း သို့မဟုတ် ဆေးသိပဿပံ အတတ်ပညာ အရ တီထွင်ဖှောထုတ်ထားတဲ့ ဆေးဝါးများလို့ မှတ်ယူစေချင်ပါတယ်။ More
ပေါက်ပင် ဘာကြောင့် ကိုင်းရတယ် (၅)
များသောအားဖြင့် ဆေးဝါး ကုမဿပဏီ တစ်ခုကနေ ထုတ်လုပ် ရောင်းချလိုက်တဲ့ ဆေးဝါး တွေကို သုံးစွဲကြရတဲ့ ဝေဒနာရှင် အပေါင်းဟာ မူလ ထုတ်လုပ် ရောင်းချ လိုက်တဲ့ ကုမဿပဏီဈေးထက် အဆပေါင်းများစွာ ကြီးမြင့်တဲ့ ဈေးနှုန်းတွေနဲ့ ဝယ်ယူ သုံးစွဲရစမြဲပါ။ ဆေးဈေးနှုန်းတွေဟာ ဘယ်နေရာတွေ မှာ ဘာကြောင့် ဘယ်လို ထပ်ထပ်တင် လိုက်ရတယ် ဆိုတာကို ဘယ်သူကမှ၊ ဘယ်တုန်းကမှ ကြေငြာလေ့မရှိပါဘူး။ More
Possession Game တွေရဲ့ ပြဿနာ
by သူသူငါငါ in အက်ဆေး
ဘောလုံးပွဲ စိတ်မဝင်စားတဲ့ စာဖတ်ပိရိသတ်တွေကို တော့ အားနာပါတယ်၊ စာရေးသူ တစ်ခါ ရေးဖူးသလိုမျိုး ပါပဲ၊ ဘာအကြောင်းပြောပြော ဘောလုံးပွဲနဲ့ လွတ်ကင်းပြီးမပြောတတ်တော့လောက်အောင် ဘောလုံးအပေါ်မှာ ရူးသွပ်နေမိတော့ကာ စာရေးတော့လည်းကျွန်တော့်ရဲ့ လောကအမြင်တွေက ဘောလုံးပွဲဥပမာတွေနဲ့ပဲ တင်းကျမ်းပြည့်နေပါတော့တယ်၊ More
ပေါက်ပင် ဘာကြောင့် ကိုင်းရတယ် (၄)
မြွေကိုက်လို့ အှောတဲ့ ဖား
ရှဉ့်လည်း လျှောက်သာ၊ ပျားလည်း စွဲသာ
ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု လုပ်ငန်းရဲ့ ကုန်ကျ စရိတ်တွေဟာ စီးပွားရေး စနစ် လွတ်လပ်လေလေ၊ အပြိုင် အဆိုင် အနိုင်ကြဲကြတဲ့ ပုဂဿဂလိက ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု တွေ ထွန်းကားလာလေလေ၊ တစ်ထစ်ပြီး တစ်ထစ် တစ်ရစ်ပြီး တစ်ရစ် မြင့်တက်လာလေ ဆိုတာကို အထက်မှာ ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးပါပြီ။ More
ပေါက်ပင် ဘာကြောင့် ကိုင်းရတယ် (၃)
ကိုယ်မွေးတဲ့ မျောက် ကိုယ့်ပြန်ခြောက်
လွတ်လပ်တဲ့ ဈေးကွက်ဆိုတာ တကယ်တော့ အဓိက ဇာတ်ဆောင် နှစ်ဦးထဲနဲ့ ပွဲထွက်လာတဲ့ တစ်ခန်းရပ် ပြဇာတ် တစ်ခုပါပဲ။ ရောင်းလို့၊ ဝယ်လို့၊ လဲလှယ်လို့ရတဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခုကို ရောင်းမဲ့သူ (Seller) နဲ့ ဝယ်မဲ့သူ (Buyer) တို့နှစ်ဦး သဘောတူတဲ့ ဈေးနှုန်း တစ်ခုနဲ့ အရောင်း အဝယ် ဖြစ်ရင် ကိစ္စပြီးပြီ။ More
အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှု အပေါ်သဘောထား
by နီမို in ကိုရူပ ဦးစိတ္တ ဆွေးနွေးခန်း, စကားဝိုင်း
ကိုရူပ ဦးစိတ္တ ဆွေးနွေးခန်း
ဦးစိတ္တ။ ။ ကိုရူပရေ ဒီတစ်ပတ်တော့ ၉၁၁ ကနေ စလိုက်တဲ့ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခု နီးပါးရှိပြီ ဖြစ်တဲ့ နိင်ငံတကာ အကြမ်းဖက် မှု တိုက်ဖျက်ရေး စစ်ပွဲတွေကို မှတ်မှတ်ရရ ရှိတဲ့အနေနဲ့ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ ပက်သက်ပြီး ဆွေးနွေး ကြရအောင် လားဗျာ၊ More
Hiriautatpa Facebook Page
ကိုရူပ ဦးစိတ္တ ဆွေးနွေးခန်း
ပေါက်ပင် ဘာကြောင့် ကိုင်းရတယ်
Nyi Lynn Seck on That's Our Bamar (29…
Yan Lynn Naing on That's Our Bamar (30…
chitdedee on အတ္တလန်တစ်ရှာပုံတော် (၉၂)
naylynn on That's Our Bamar (30…
naylynn on That's Our Bamar (10…
naylynn on That's Our Bamar (7)
naylynn on That's Our Bamar (6)
Archives Select Month January 2012 (1) August 2011 (2) July 2011 (5) June 2011 (12) May 2011 (1) March 2011 (2) February 2011 (4) October 2010 (5) September 2010 (21) August 2010 (9) July 2010 (8) June 2010 (9) May 2010 (5) April 2010 (3) March 2010 (2) February 2010 (4) January 2010 (1) December 2009 (3) November 2009 (3) October 2009 (5) September 2009 (2) August 2009 (5) July 2009 (3) June 2009 (3) May 2009 (8) April 2009 (4) March 2009 (8) February 2009 (6) January 2009 (7) December 2008 (3) November 2008 (3) October 2008 (6) September 2008 (10) August 2008 (19) July 2008 (12) June 2008 (7) May 2008 (1) February 2008 (1)
Hiriautatpa Facebook Account
Juan Facebook Account
All the intellectual works by Hiriautatpa is licensed underaCreative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.
Based onawork at www.hiriautatpa.com.
That's Our Bamar (6)